पर्वत जिल्ला अस्पतालको मुर्दाघरको ढोका फुटाएर रिपोर्ट नआउँदै आफन्तले शव लगे
Home/Banner News/पर्वत जिल्ला अस्पतालको मुर्दाघरको ढोका फुटाएर रिपोर्ट नआउँदै आफन्तले शव लगे
३२ जेठ पर्वत । कोरोना संक्रमणको शंका गरिएको एउटा शव पर्वत अस्पतालबाट आफन्तले जबरजस्ती लगेका छन् । शनिबार साँझ कोरोना संक्रमणको आशंकामा पर्वत अस्पतालको मुर्दाघरमा राखिएको शव आइतबार दिउँसो आफन्तले लगेका हुन् ।
विगत २ वर्षदेखि कलेजोसम्बन्धी समस्याबाट पीडित कुश्मा–४ का ४५ वर्षीय पदमबहादुर परियारलाई कोरोनासँग मिल्दो लक्षण भएपछि मुत्युपश्चात् नमुना परीक्षणका लागि स्वाब निकालिएको थियो । उपचारका क्रममा अन्तिम समय ज्वरो खोकी लगायतका कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले नमुना परीक्षणका लागि आइतबार बिहानै स्वाब पोखरा पठाएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका करिब ३० तथा सशस्त्र प्रहरीका करिब २२ जना सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा घेरा तोडेर आफन्तले मुर्दाघरभित्र राखिएको शव ढोका फुटाएर लगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । रिपोर्ट नआउँदै जबरजस्ती शव लगेपछि अस्पताल आसपास र कुश्मा बजारवासी त्रसित भएका छन् । ‘नाराबाजी गर्दै आएकाले अरु शवजस्तै बोकेर जबरजस्ती यही बाटो लगे,’ अस्पताल नजिकैका एक स्थानीयले भने, ‘कोरोना लागेकै भए डर भयो ।’ करिब १५–२० जना आफन्तलाई ५० को हाराहारीमा रहेका सुरक्षाकर्मीले समेत नियन्त्रणमा राख्न नसकेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार मृतक विगत २ वर्षदेखि कलेजोसम्बन्धी समस्याको नियमित उपचार गराइरहेका थिए । मृतकका छोरा विजयका अनुसार उनलाई जेठ २४ देखि २८ गतेसम्म पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरी घर ल्याइएको थियो । शनिबार स्वास्थ्यमा पुन: समस्या आएपछि पर्वत अस्पतालमा ल्याइएको थियो । पर्वत अस्पतालले थप उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा पठाएको थियो । अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएपछि फर्काएर पर्वत अस्पतालको मुर्दाघरमा राखिएको थियो ।
अस्पतालले दिएको जानकारीअनुसार उनमा कोरोनासँग मिल्ने केही लक्षण देखिएका कारण स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको हो । ‘हामीले मात्रै होइन, निर्देशकज्यूसँगै कुरा गरेपछि एकपटक हेरौं भनेर बिहानै स्वाब पठाइएको हो,’ अस्पतालका निमित्त मेसु डा. शिशिर देवकोटाले भने, ‘केही घन्टा कुर्नुस् भन्दा पनि उहाँहरुले मान्नुभएन ।’ उनका अनुसार मृतकका आफन्तले अस्पतालमै करिब ३ घन्टासम्म स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध गालीगलौज र नाराबाजी गरेका थिए ।
मृतकको रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकोको जसरी सोही मापदण्डअनुसार नै अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आफन्तले जबरजस्ती लगेको शवको कोरोना पुष्टि भएमा संक्रमणको जोखिम बढ्ने चिन्ता स्वास्थ्यकर्मीले गरेका छन् । यसअघि मणिपाल शिक्षण अस्पतालमै कोरोना भेटिएका पर्वतको कुश्मा–३ का युवासँगै अस्पतालमा रहेका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरुले उनमा कोरोनाको शंका गरेका हुन् ।
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले भने स्वास्थ्यकर्मीहरुको सल्लाहमै शव आफन्तले लगेको बताए । ‘यो डाक्टरहरुको कुरा हो,’ उनले भने, ‘सहमतिमै लगेको हुनुपर्छ । मैले डाक्टरहरुले जे भन्छन्, सोहीअनुसार गर्नु भनेको हो ।’
५ जनाको मजदुरहरुको सामुहिक हत्या
को बन्लान बिकास बोर्डको अध्यक्ष ?
काँग्रेस बैठक : नागरिकता विधेयकको विवादले झण्डै हात हालाहाल